ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်သတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်သတင်း
Posted by chityimhtoo on Jan 2, 2012 in News | 12 comments
နှစ်သစ်ကူးပါတီကို မိတ်ဆွေတွေနဲ့မဆင်နွဲနိင်ပဲ သူကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီး တေဇပိုင် ၀ိဒူရိယ ဆေးရုံးကို သွားရတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒီဆေးရုံက ကိုးမိုင်တရုပ်သငြိုင်းကို စစ်တပ်ကသိမ်းပြီးတေဇကို ရောင်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဟိုရောက်တော့ ဆေးရုံးမှာဆရာဝန်တွေမရှိပဲ နစ်သစ်ကူးပါတီ ဆင်နွဲနေကြတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါနဲ့ သူဟာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို ဆက်ပြီးကားမောင်းသွားရတယ်။
ဒါကို ဘယ်ကရပါသလည်း.. ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်ရေးတာလား သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား..။
ကိုချစ်ရင်ထူးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်လား??? ကူးရင်လည်း ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်နဲ့ ကူးလာတဲ့နေရာကို
သေချာစွာညွှန်းသင့်ပါတယ်… သဂျီးလည်း ၂၀၁၂ မှာ
ပိုမို၍ စည်းကမ်းပိုင်းကို တင်းကျပ်နေပီလို့… သတင်းကြားထားပါတယ်..
ဒီလို ဖော့ရက်မေးလ်းတွေတင်တဲ့ ကိစ္စ တခြားသတင်းဆောင်းပါးကို
မဖော်ပြပဲ ကိုယ်တိုင်ရေးဟန်တွေကြောင့် ခဏခဏ ရွာဆူနေလို့ပါဗျာ..
တခုခုတော့မှားနေသလိုပဲ။ ဒုတိယအကြိမ် နှလုံးရောဂါဖေါက်ခြင်း ( Second Attack ) ရနေတဲ့သူ ဟာကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီးဆေးရုံတရုံပြီးတရုံကူးနေရတယ်ဆိုတာတမျိုးပဲလားလို့။ ဒါမျိုးဆိုတာ emergency case ဖြစ်လို့သူနဲ့နီးစပ်ရာကဆေးရုံကိုဖုန်းဆက်ပြီးအရေးပေါ်ကားခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ သတင်းပိုတိကျရင်ကောင်းမယ်။ ပါတီကနေထလာတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဟာသူနဲ့ပါတီအတူကျင်းပနေ သူတွေထဲမှာဆရာဝန်တော့ပါမှာပဲ။
ဆေးရုံကို သွားတာတောင် ဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ ။
၀ိတိုရိယဆိုတာက ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံပါ ။ဟိုက်ကလပ်စ်တွေလောက်သာ ကုသမှု ခံယူနိုင်တဲ့နေရာမျိုး ။ ပါတီကတော့ ပါတီပေါ့ တာဝန်ချိန်က ၂၄နာရီ အလှည့်ကျရှိမှာပါပဲ ။ အခုလို ဆရာဝန်အားလုံး (တစ်ယောက်မကျန်) မရှိဘူးဆိုတာကတော့ တွေးတောစရာပါပဲ ။
ကိုအောင်ကျော်ကျော်ဦး ထောက်ပြတာ လက်ခံတယ်..
၀ိတိုရိယလို ဆေးရုံကို သွားတာ ဆရာဝန်မရှိဘူးဆိုတာ..
လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ ကိတ်စပဲ… ဘဲရီးဘတ်ဒ်ဗျာ…
ကျောင်းမှာ ဆရာ မရှိတာမဖြစ်နိုင်
သုသာန်မှာ လူသေမရှိတာ မဖြစ်နိုင်
ဆေးရုံမှာ ဆရာဝန်မရှိတာ မဖြစ်နိုင်….
အင်း တခုခုတော့မှားနေပီထင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အီးဂရက်စ်ရဲ့ တည်ထောင်သူတစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့
အတွက် မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်းနည်းရပါကြောင်း……….
ဆောတီးပါဗျာ ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ် *ဖတ်လိုက်ရတဲ့လို့ * ပါပါတယ်။ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေမှာဖတ်လိုက်
sorry …sorry ….sorry
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်လေ လူတော်တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးတာပဲမဟုတ်လား
ဆရာဝန်ဆိုတာတော့ ဆေးရုံမှာ ရိုကောင်းပါရဲ့လေဗျာ…..
အဲ့ ဒီလိုလည်းပြောလို့ မရသေးဘူးကိုရင်စည်သူရေ့
ဆေးရုံမှာဆရာဝန်မရှိတာဖြစ်တတ်ပါတယ် ကျွှန်တော့်အတွေ့ အကြုံအရ
အဲ့ ဒီဆေးရုံက ဆရာဝန်၎ယောက်ရှိတယ်။
အခုဆောင်းပါးယုတ္တိတန်ခြင်း မတန်ခြင်းကို ကျွှန်တော် မပြောလို။
ငွေမပါရင် တော့ သေဖို့သာပြင်ထားပဲနောက် မှားယွင်းမူတွေ….
ပြောရင်တော့ စုံနေတာပဲ မပြောသေးဘူး ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ လူတွေကိုလေးစားပါတယ်။
ဆရာဝန်မရှိလို့ ဆေးရုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးနေရတယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊
သူနဲ့နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကရတဲ့ သတင်းအရ
နေ၀င်းမောင်က သူ့ကိုယ်သူ ဗိုက်နာတယ်ထင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီး ၀ိတိုရိယဆေးရုံသွားခဲ့ပါတယ်။
တာဝန်ကျဆရာဝန်က Dr.နေ၀င်းမောင် မှန်းလည်းသိ၊
ECG မှာ နှလုံးသွေးကြောပိတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ့ရတော့ ဆေးရုံကြီးကို သွားခိုင်းပါတယ်။
Victoria မှာ ကတည်းက shock ရနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
သူဖြစ်တာက inferior and posterior infarct လို့ သိရပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေပေါ့။
နှလုံးခုန်မှု ထိန်းချုပ်တဲ့ ကြွက်သားတွေ သွေးငတ်သွားတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။
ဆေးရုံကြီးမှာ အထူးကုတွေ ၀ိုင်းကုရာက နည်းနည်းသက်သာလာပြီး တတိယအကြိမ် attack အရမှာ အသက်ပါပါသွားရှာပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်က hernia ခွဲတဲ့ အချိန်ကတည်းက သူ့ရဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အလုပ်ကိုဘဲဦးစားပေးနေပြီး Not me ငါတော့ ဒါလောက်နဲ့မသေနိုင်သေးပါဘူးထင်မိတာလည်းပါမှာပေါ့။
သူ့ idea တွေ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ လူတော်တစ်ယောက်ဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှငြင်းကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောစရာရှိတာကတော့ မြန်မာပြည်မှာ လုံလောက်တဲ့ emergency treatment ပေးဘို့
ပညာရှင်၊စက်ကိရိယာ၊လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုတွေတော့ အမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးသင့်နေပြီလို့ မြင်ပါတယ်။
အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရတော့မှ ဇာတ်ရည်လည်သွားတော့တယ် … ။
လူတော်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာ တိုင်းပြည်အတွက်တော့ နစ်နာသွားပါတယ် ။
သူက.. အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးစံနစ်ကို ပြောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့သူပေါ့..။
အဲဒီကနေမှ.. ကျမ်းမာရေး.. ပညာရေး စံနစ်တွေ.. နိုင်ငံတော်အဆင့်..ပြောင်းယူရမှာပါပဲ..။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ငွေရှင်တွေဟာ.. ထစ်ဆို.. စင်္ကာပူ၊ဘန်ကောက်ထွက်ကုလို့ ရနေတယ်ထင်ပြီး.. မြန်မာပြည်ကျမ်းမာရေးစံနစ်ကို ဂရုမစိုက်.. မလှူတန်း..အထောက်အကူမပြုတာလည်း ပါမယ်ပေါ့..။
ကိုတေဇ တုန်းကလည်း.. တောင်ပေါ်မြင့်မြင့်တက်နိုင်တဲ့.. ကယ်ဆယ်ရေးချော့ပါမရှိလို့.. ထိုင်းနိုင်ငံကမှာခဲ့ရတယ်ကြားဖူးတယ်..။
ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်လည်း.. အရေးပေါ်ဆေးရုံကား မခေါ်..မသုံးနိုင်ခဲ့လို့ပဲလို့ ယူဆမိပါတယ်..။
ငွေရှင်ကြီးတွေအထဲက.. မွန်မြတ်တဲ့အလှူတခု.. ဘယ်သူလှူမလည်း …ဘယ်သူစပေးမလည်း… သိချင်သား..။